HTC U Ocean: Sary voalohany sy famaritana ara-teknika | Androidsis
HTC U Ocean: famaritana sary sy teknika voalohany
Tamin'ny volana Janoary lasa teo, nilaza i HTC fa tsy mikasa ny handefa ilay izy HTC 11, ary ireo mpankafy dia tsy maintsy nanorim-ponenana tao amin'ny U Ultra fotsiny. Na izany aza, hita fa mikasa ny handefa fitaovana avo lenta hafa ity orinasa ity amin'ity taona ity, antsoina hoe U "Ocean".
Ny HTC U Ocean dia afaka nipaoka tamin'ity volana ity ary noho ilay Evan Blass fanta-daza dia afaka mahazo hevitra tsara kokoa momba ny endrika ivelany sy ny pitsopitsony momba ny teknika izy, izay manondro ny finday premium miaraka amin'ireo singa fitaovana tsara indrindra misy ankehitriny.
1 Famolavolana HTC U Ocean
2 Famaritana teknika an'ny HTC U Ocean
Famolavolana HTC U Ocean
Avy amin'ireo sary navoakan'i Blass tao amin'ny Twitter no ahitantsika fa ny finday HTC vaovao dia mitovy amin'ny U Ultra fa ny fakan-tsary any aoriana kosa boribory fa tsy toradroa. Misy ihany koa ny flash LED roa miaraka amin'ny toa loko hafa vita amin'ny metaly ranoka.
Etsy ankilany, eo aloha, ny sensor amin'ny dian-tànana dia miavaka eo ambanin'ny efijery, ary zorony sy zana boribory boribory.
Famaritana teknika an'ny HTC U Ocean
Ny HTC U Ocean dia toa hanasongadina a Fampisehoana Quad HD 5.5 (2560 x 1440 teboka), ny processeur Snapdragon 835 Qualcomm ary 4GB an'ny RAM. Toy izany koa, hisy ihany koa ny fahatsiarovana anatiny ny 64GB / 128GB azo esorina amin'ny microSD.
Raha resaka fakan-tsary dia hirehareha ny HTC U Ocean a Fakan-tsary 12 megapixel aoriana misy fakan-tsarimihetsika Sony IMX362, raha ny eo aloha kosa dia hanana fanapahan-kevitra 16 megapixels ary hampiasa a Sensor IMX351 avy any Sony koa.
Amin'ny maha endri-javatra malaza azy, mariho fa ny HTC U Ocean dia hanasongadina a kitapo izay hanome ny mpampiasa ny fahaizana mifehy ny asan'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fihetsika.
Ary farany, ny HTC U Ocean dia hampiditra ny rafitra fiasa Android 7.1 Nougat miaraka amin'ny sosona fanaingoana Sense 9 avy amin'ny HTC.
Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra na ny vidiny mety, na ny daty fanombohana ny HTC U Ocean, na dia misy aza ireo fivoahana rehetra ireo dia manondro fa izany no ho flagship HTC tena izy ho an'ny 2017.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » HTC U Ocean: famaritana sary sy teknika voalohany
Ny fihetsiky ny Facebook dia nandefa mivantana ny famonoana olona